Nitokona ireo koperativa mpitatitra : mihamahery vaika ny fanafihana taksiborosy | NewsMada
Nitokona ireo koperativa mpitatitra : mihamahery vaika ny fanafihana taksiborosy
Manoloana ny fanafihan-jiolahy mpanakan-dalana eny amin’ny lalam-pirenena fahafito (RN7), izay mirongatra sy mihamahery vaika, naneho ny alahelony tamin’ny alalan’ny fitokonana ireo kaoperativa mpitatitra eny Fasan’ny Karana, omaly.
Sprinter iray voatafika tany Ambodimifahy, 40 km miala an’Ambalavao, ny alatsinainy hifoha talata teo. Nosakanan’ny jiolahy vatobe ny lalana ka tsy afa-nandeha ny fiara. Nirefodrefotra ny basy nanoloana izany. Naratra ny olona roa vokatr’izany, voaroba avokoa ny mpandeha rehetra. Niverin-dalana avy hatrany ny fiara roa tao aoriana izay nisy zandary telo lahy nirongo Kalachnikov. Tavela irery teo ilay taksiborosy voatafika.
Taorian’ity fanafihana taksiborosy ity, nanao fitokonana, omaly, ireo fiara mpitatitra rehetra teny Fasan’ny Karana. Hetsika fanehoana amin’ny tompon’andraikitra fa tsy milamina ny tany, miaina anaty horohoro ny mpitatitra sy ny mpandeha, ary voatohintohina ny fiharian’izy ireo. Tsy nisy, noho izany, ny fiara nandeha ny maraina sy ny antoandro ho an’ireo mampiasa ny lalam-pirerena fahafito.
Nilaza ireo mpitatitra eny Fasan’ny Karana fa tsy afaka hiasa raha mbola misy ny tsy fandriampahalemana eny amin’ny lalam-pirenena. “Miseholany ny fanafihan-jiolahy taksiborosy, mirongo basy ireo ary tsy matahotra zandary akory, raha ny nitranga tany Ambodimifahy Ambalavao. Ireo zandary indray no vaky nandositra”, hoy ireo mpamily eny Fasan’ny Karana.
Tsy mahavaha olana izany ny zandary fa manavotra ny ainy ny ataony, na efa mirongo Kalachnikov aza izymanoloana ny jiolahy mpanakan-dalana. Maromaro ireto farany, mirongo basim-borona, fa raha mitaha amin’ny fitaovana eny am-pelatanan’ny zandary sy ny fiofanana azony kosa, mety tsy misy dikany ihany.
Miaro tena ny zandary
Araka ny fanazavana azo, niaro tena ireo zandary telo lahy nanaraka fiara. Naka toerana azo antoka ary niverina nanao tifi-danitra nampitsoahana ireo jiolahy. Milaza koa ny zandary fa misy hatrany ny zandary manaraka ireo taksiborosy amin’ny alina fa indraindray tsy manaraka fandaminana ny fiara, ary misy hatrany ireo mandeha irery tsy manaraka “caravane”.
Raha tsy voafehy tokoa ity fanafihana amin’ny lalam-pirenena ity, efa tafiditra amin’ny andro fialan-tsasatra rahateo isika, hisy fiantraikany ratsy amin’ny lafiny sosialy, toekarena ary kolontsaina. Hihena ny fandehanan’ny olona mamonjy faritra, tsy ho afa-mody ny avy lavitra noho ny fanafihana mety hahazo azy. Miandry paik’ady matotra ny rehetra, mety tsy hiditra ny volan’ny mpitatitra, fa tena lasibatra voalohany ireo vahoaka miaina anatin’ny horohoro sy iharan’ny fanafihana.